मिलन गुरुङ जस्तो चोर फटाहालाई झा'पड हानेर यत्तिकै छाड्नुहुन्न, गो'ली हान्नुपर्छ : दिपक मनाङे - Himali Patrika
मिलन गुरुङ जस्तो चोर फटाहालाई झा’पड हानेर यत्तिकै छाड्नुहुन्न, गो’ली हान्नुपर्छ : दिपक मनाङे
हिमाली पत्रिका ८ माघ २०७६, 2:05 am
पोखरा । पोखरामा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘मुख्यमन्त्री कप’ फुटबलमा विशेष अतिथिको रुपमा डाकिएका थिए गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रमुख अतिथिको रुपमा निम्त्याइएका थिए । मुख्यमन्त्री कप उद्घाटन गर्न आएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई स्वागत गर्ने तयारीमा थिए सबै । मुख्यमन्त्रीलाई स्वागतको तयारी चलिरहेको बेला सांसद मनाङले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झा पड हाने ।
आखिर मनाङ्गेले गुरुङलाई किन हात पात गरे त ? रातोपाटीले एन्फा कास्कीका अध्यक्षलाई झापड हान्नुको कारणबारे सांसद मनाङेसँग कुराकानी गरेको छ ।
आजदेखि गेम सुरु भयो । कहाँ बस्ने ? कहाँ सुत्ने थाहा छैन । टाइसिट निकाल्दासम्म जिल्लाको अध्यक्षलाई थाहा छैन । भ्रष्टाचार बढेको छ । सिस्टम ब्रेक गर्ने हो । तपाईंले लेखेर गर्नुहुन्छ । म झा पड हानेर गर्छु ।
नेपालमा झापड त कमै हो, ‘‘आज मैले झा पड मात्र हाने तर यिनीहरुलाई गो ली हा न्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर, के गर्ने हाम्रो गो ली हा न्ने निकाय छैन । सांसदको काम हो यो । आफ्नो प्रदेशमा राम्रो न राम्रो के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । खासमा मेरो अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्मा छिरिङलाई पनि झा पड हा न्ने प्रोग्राम थियो । अर्को ठाउँमा त यसले मेरो पि टाई खाइहाल्छ । यति धेरै चोरी चकारी गर्नेलाई मैले भेट्न नपरोस् । पूर्वअध्यक्ष गणेश थापालाई फेरेर ल्याएको यो राम्रो मान्छे भनेर हो । तर, यो त थापा भन्दापनि खतम देखियो ।
मुख्यमन्त्री कप गाउँमा गराउने ? मनकामना कप रंगशालमा ? मुख्यमन्त्री कप भनेको के हो ? पृथ्वीसुब्बा गुरुङको लागि लडेको होइन म । भोलि कुल्लिको छोरा पनि मुख्यमन्त्री हुनसक्छ । मैले मुख्यमन्त्री पदको लागि ल डेको हो । मुख्यमन्त्री कप भनेपछि रंगशालमा हुनुपर्छ । सैनिक गाउँमा होइन ।
यो जस्तो चोर फटाहालाई यत्तिकै छा ड्नुहुन्न । म जिन्दगीमा भ्रष्टाचार गर्दिन । ‘भगवान कसम, आमाबाबु कसम खाएर भन्छु म भ्रष्टाचार गर्न सांसद बनेको होइन । आफ्नो पैसा खर्च भएको छ । तर, भ्रष्टाचार गरेको छैन ।’ एक दुई जनालाई पैसा खुवाएर यो हि रो बनेको छ । मुख्यमन्त्रीको बेइज्जत हुुनुभएन । भ्रष्टाचारीलाई प्रत्येक जिल्लामा झा पड हा न्नु पर्ने । यहि ताल हो भने सबैले झा पड खान्छन् । साभार: रातोपाटीबाट